पाठेघरको क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने ? – Sky News Nepal
२ माघ २०७८, आईतवार १५:४८ मा प्रकाशित
कस्तो अवस्थामा यसको परीक्षण गर्ने ? कस्ता रहन्छन् यो क्यान्सको लक्षणहरु?
यो परीक्षणले भविश्यमा हुने धनजन र खतराबाट बचाउँदछ। हामिले हामिकहाँ आउने महिला दिदीबहिनी आमाहरुलाई यस्ता रोगबाट आउने खतरा लक्षण र सवाधानका उपायहरुको ज्ञान दिन जरुरी छ।
(डा शर्मा एभरेष्ट अस्पतालमा स्त्री रोग तथा निशन्तान विशेषज्ञको रुपमा कार्यरत छिन्) (स्वास्थ्य खबर)